I-eyequant: Ukwenza imephu yokushisa ku-Fly | Martech Zone
ULwesibili, May 15, 2012 NgoMgqibelo, July 8, 2017 Douglas Karr
I-EyeQuant imodeli yokubikezela iso ebikezelayo ebheka ngqo lokho abasebenzisi abakubonayo ekhasini kumasekhondi okuqala ayi-3-5. Umbono ulula: kungakapheli imizuzwana emi-5 umsebenzisi kufanele akwazi ukubona ukuthi ungubani, ukuthi siyini isiphakamiso sakho senani, nokuthi yini okufanele uyenze ngokulandelayo. I-EyeQuant ivumela ukwandiswa kokuklanywa kwekhasi ukuqinisekisa ukuthi kunjalo.
Nayi imiphumela yamahhala yesibonisi sethu se-EyeQuant… Ngijabule kakhulu lapho kunakwa khona ekhasini lethu lasekhaya!
Okuhlukanisa i-EyeQuant nezinye izinsizakalo iqiniso ukuthi kuthatha imizuzu embalwa ukuthola imiphumela. Imiphumela ibuye ifike kumamephu ahlukene amathathu:
The ibalazwe lokunaka ikhombisa ukuthi yiziphi izindawo zesikrini sakho sesikrini esitholwe kakhulu, esimaphakathi noma esincane, ngokulandelana. Izindawo ezithinta amehlo ikakhulukazi zinombala obomvu ocebile, izindawo ezimaphakathi zimakwe ziphuzi, izindawo ezibuthakathaka zesithombe-skrini sakho zizovela ngokuluhlaza okotshani. Izindawo ezingafihli lutho azinaki nakancane.
The imephu yokubona inikeza ukubuka konke okusheshayo kwekhasi lokunaka lekhasi lakho lewebhu: kukhombisa shazi ukuthi abasebenzisi bazokubonani kumasekhondi okuqala amathathu wokuvakasha kwabo. Ngokususelwa ekubalweni kwe-acuity ebukwayo ebonwayo kanye nebanga elijwayelekile ukusuka esikrinini, izindawo ezisobala zemephu yokubona yizo abasebenzisi bakho abazobona ngaphakathi kwalesi sigaba esibalulekile sokuma.
The Izifunda Zentshisekelo isici sinikeza imiphumela enemininingwane eminingi ye-EyeQuant. Kukunika amandla okuchaza izifunda eziyi-10 kusithombe-skrini sakho, i-EyeQuant esizobala inani lephesenti, isb. + 45% noma -23%. Inani libonisa ukuthi indawo ebaluleke kakhulu (noma engaphansi) yendawo iqhathaniswa kanjani nesilinganiso sesithombe-skrini.
Izindleko zensizakalo muhle, ngokuHlaziywa okungu-5 kwe- $ 199 / mo US noma ama-50 ku- $ 449. Kukhona futhi amanani entengo ebhizinisi atholakalayo futhi i-interface iyatholakala ngazo zombili isiJalimane nesiNgisi. I-EyeQuant nayo ine- API futhi iphakethe lomthengisi liyatholakala!
Tags: ukwenziwa kwemephuimephu yokushisaukwakheka kokushisaukubona imephu
Ochwepheshe Bokumaketha Abangaphakathi Uzofunda Ku-inthanethi
May 15, 2012 ku-6: 30 PM
Umsunguli we-EyeQuant lapha. Siyabonga ngokumemeza kukaDouglas! Lokhu kumane nje kuyisiqalo futhi i-EyeQuant inezinto * eziningi * ezipholile impela kwipayipi lango-2012. Uma wena noma omunye wabafundi bakho unemibuzo noma impendulo, ngingathanda ukuzwa kuwe nge-fabian at eyequant dot com.